GOOBAHA DAGAALKA: SHANTA Meelood Ee Laga Go'aaminayo Guusha Caawa, 10ka Ciyaartoy Ee Kulanka Iyo Xogta Xiddigaha Foodda Is Daraya - Page 3 of 3 - Gool24.Net
GOOBAHA DAGAALKA: SHANTA Meelood Ee Laga Go’aaminayo Guusha Caawa, 10ka Ciyaartoy Ee Kulanka Iyo Xogta Xiddigaha Foodda Is Daraya
August 23, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
2. Kylian Mbappe vs Alphonso Davies
Kylian Mbappe waa ciyaartoyga ugu wanaagsan ee PSG inkasta oo ay dadka qaarkood ku doodaan in Neymar uu yahay kan ugu wanaagsan. Dooddan marka meel la iska dhigo, waxa uu Mbappe yahay weeraryahanka jabiya difaacyahannada ee farsamadiisa, orodkiisa iyo xarakaadkiisuba jabiyaan cid kasta oo ka hor timaadda.
Haddii Kylian Mbappe uu go’aansado inuu garabka midig uga ciyaaro kooxdiisa caawa, waxay si toos ah iskaga hor iman doonaan difaaca layaabka leh ee Alphonso Davies oo ahaa midkii dhabarka ka jabiyey Barcelona, isla markaana kala daadiyey shaxdii ay isku soo habaysatay markii uu orod iyo farsamooyin cajiib ah dhinac dhan kusoo burburiyey.
Alphonso Davies waa inuu ka faa’iidaysto orodkiisa si uu u xakameeyo Mbappe oo isaguna ka mid ah laacibiinta dunida ugu dheeraysa. Difaaca reer Canada waxa hab-difaacistiisa u dheer farsamooyin layaab leh oo weerarka uu kaga qayb qaato, halka uu soo galo khadka dhexe marka looga baahdo.
Goolhaye Manuel Neuer ayay si toos ah u wada shaqeeyaan, waxaanu goolhayuhu eegtaa dhaqdhaqaaqa laacibkan oo uu kubadda u tuuro.
Dagaalka ay wada gelayaan Alphonso Davies iyo Kylian Mbappe waxa uu saamayn badan ku yeelanayaa ciyaarta, iyadoo midkooda laga adkaadaana ay u badan tahay in kooxdiisa laga adkaado.
1. Neymar vs David Alaba
Sida Lewandowski iyo Thiago Silva oo kale ayuu booskani u yahay mid ciyaarta laga go’aaminayo, waxaana Neymar ay is haleelayaan Alaba oo marna sida difaaca u ciyaara, marna sida khadka dhexe iyo garbaha u dheela.
Xiddiga reer Brazil ayaa ciyaaro sarreeya soo bandhigay kulamadii kooxdiisa ee xili ciyaareedkan, waxaanay si fool ka fool ah isku haleelayaan laacibka muhiimka u ah Munich ee Alaba oo difaaca dhexe la geeyey markii uu Davies garabkii bidix qabsaday, isla markaana uu Kimmich la wareegay difaaca midig.
Neymar oo jabsada difaaca dhexe, waxay ka dhigan tahay inuu si toos ah kubadda ugula tegay Neuer, haddii se uu Alaba joojiyo Neymar, waxa istaagaya khatarihii goolkooda ku socon lahaa, waxaana sahlanaanaysa in Bayern Munich ay guusha ciyaarta hesho.
Si kastaba, shantan goobood ayaa ciyaarta laga go’aamin doonaa, waxaana koox kasta rajadeedu ku xidhan tahay sida ay u ciyaaraan shanta laacib ee boosaskan ugu dagaallamaya.
Aad ayan usugayna